A ga-abawanye ụgbọ ala na Belkıs - RayHaber
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region27 GaziantepA ga-abawanye ụgbọ ala na Belkıs
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Ala nke Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey 0
ikekwe nkwụsị ụgbọ ala ga-aba ụba
Onye isi obodo nke Gaziantep Fatma Sahin, Belkis District nke Sehitkamil gara leta ndị agbata obi. Sahin, iji dozie nsogbu nke nkwụsị ụgbọ ala na-ezughi ezu na ndị otu agbata obi, Belkis rịọrọ ka ịmalite mbido iji gbalite bọs bọs na agbata obi.
Mgbe ọ na-ekwu okwu site na iji aha obodo, Fatma Şahin gara leta agbataobi ahụ iji hụ nsogbu dị na ya ma gee ndị amaala ntị. Na-enyocha nsogbu ndị isi muhtars agbata bụ Şahin, usoro idozi nsogbu nke idozi nsogbu kwụghachiri ocheeze n’obi ndị amaala.
Mesaisine, Şehitkâmil Belkıs District nke mpaghara ahụ, malitere site na Sahin, ma arụ ọrụ a na-enyocha saịtị ahụ, yana ịchọpụta adịghị ike nke agbata a, ndị otu ahụ nyere ntuziaka iji kpochapụ adịghị ike.
Ntughari uche nke oru ezuchara na ndi isi onye agbata obi, Enver Özekici'yle Sahin, nnochi anya ndi njem nke ndi agbata obi na n'ihi ogha nke ndi n’agba n’iru n’ezughi oke n’uche ochicho nke onu ogugu nke bus, gwara ndi otu a ka ha bido oru dozie nsogbu a. Mukhtar Özekici'yi na-agagharị nkwụsị na-esote onye isi ala, ụgbọala ahụ nwere ezigbo mmasị na ụmụ amaala na-eche ụgbọ ala ahụ, na-akparịta ụka n'ụkwụ.
Onye agbata obi Belkis ruo ọtụtụ afọ iji dozie ụkọ mmiri, na-ekele Onye Isi Ala Fatma Sahin maka mbọ ọ gbara na ndị bi na mpaghara, mgbakwunye agbata obi na ịrụcha ọrụ na mpaghara a ga-edozi site na mmecha nke adịghị ike, o kwuru.
Mgbatị nke Tram na-akwụsị na Gaziantep Na-amụba ikike nke ndị njem 14 / 01 / 2018 Gaziantep Metropolitan Municipality enyemaka Upgrading na tram stop ọsọ site Gaziulaş ma na-amụba na-esure ụgbọala abawanyele ya njem ikike. N'ihi na dapụtara na-abawanye na ike na-aghọ usoro nke okporo ígwè ugbo ala na-agba ọsọ na usoro nwere ike na-arụ ọrụ na ndọtị nke stop dị ka a N'ihi ya, na-abawanye na ọnụ ọgụgụ nke ndị njem na-ahọrọ ọha iga tram mere. A kwukwara na ọ bụ ọmụmụ ihe ka a na-enyekwu njem ụgbọ ala. Dị ka nkwupụta nke ndị ọrụ Gaziulaş si kwuo; Ọnụ ọgụgụ kachasị nke ụgbọ ala ji mee ihe na 2017 wagon. N'ụzọ dị otú a, mma nkasi ụgbọ njem ka mma. Na afọ 38, ndị ọrụ Gaziulaş kwuru na ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala kwa ụbọchị ezubere ka ha bilie n'elu 2018 laş
Enwekwu ume maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala na Germany 24 / 04 / 2014 Na Germany, mkpali nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala mụbara mgbe e buliri okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè kachasị elu: njem ime njem na-arịwanye elu na Germany ebe 2013 na ọnụego nke njem ụgbọ ala na-abawanye na-arịwanye elu mgbe nke German Dailways (DB). Njem ụgbọ ala, bụ nke dị ọnụ ala karịa 50 site na ụgbọ oloko, na-adịkarị n'etiti obodo ukwu. Baden-Württemberg (BW) bụ otu n'ime mba ndị na-akwado ụlọ ọrụ ụgbọ ala. N'afọ a, Ngalaba Ụgbọ njem nke United States gụnyere ụlọ ọrụ ụgbọ ala 73 dịka mkpali. Ihe mkpali ahụ ga-eru 5 nde Euro afọ n'afọ a. Mmetụta ndị ahụ ga - adị iche n'etiti 17 puku 500 na 157.500 Euro dabere na ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ma ụgbọala ndị ahụ ọ dị mma na gburugburu ebe obibi ka ha na-enye nsogbu ...
Mgbatị nke Tram na-akwụsị na Gaziantep Na-amụba ikike nke ndị njem
Enwekwu ume maka ụlọ ọrụ ụgbọ ala na Germany
The amara nke Hasan Mountain ga-amụba
A ga-eme ka isi ụlọ ọrụ ndị isi ụgbọ mmiri Russia rịa elu site na rubles nke 13
Ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ụgbọ oloko ga-amụba na Istanbul
Enweghị mgbochi na ise siga na Tram, Metrobus na Bus Bus
Zụgharịa egwu na bọs na-akwụsị
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (395) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)